Iyo inofungidzirwa mitengo yeiyo iPhone 7 inosvinwa | IPhone nhau
Sezvo isu tanga tatoyambira, pamazuva aya runyerekupe rwakawanda rwunotenderera padandemutande, uye zvimwe zvichazotenderera apo tinoswedera pedyo munaGunyana. Dzimwe dzerunyerekupe idzi dzinozoitika, asi vamwe havazomboone mwenje wezuva. Runyerekupe rwazvino rwakareva kuti kuchave nemhando yakajairika uye yemhando yepamusoro, iyo 5.5-inch iri iyo yaimbozivikanwa sePro.Asi fungidziro mitengo yakasvinwa iPhone 7 vanotitaurira imwe nyaya.
Runyorwa rwekutanga, iyo yauinayo mune inotevera skrini uye uko mamodheru aripo akaverengerwa (ndinofungidzira kuti kuenzanisa), ine mitengo muYuan, mari yeChina, asi ini ndatora rusununguko rwekuzvipfuudza kuma euro uye wedzera VAT kubva kuSpain (mitengo yepakutanga zvakare ine yavo VAT inosanganisirwa). Chero zvazvingaitika, ndinofungidzira kuti iyo iPhone 7 Pro, kana ikazosvika, ichave nemutengo wakakwira chaizvo.
IPhone 7 yakaburitsa mitengo (mumaeuro)
Pakati (64 kana 128GB)
Mukuru (128 kana 256GB)
Mumitengo iri pamusoro apa, iwe unofanirwa kufunga nezve kugona kwekuchengetedza. Iyo iPhone 6s / Plus inochengeta iyo 16GB, 64GB uye 128GB, nepo, maererano nerunyerekupe, iyo iPhone 7 ichasvika iine 32GB yekuisa uye 256GB yemhando yepamusoro, asi hazvisi pachena kana ichi chitsva chinzvimbo chichawanikwa chete muPro modhi kana kana iyo yose iPhone 7 ichizosvika iine masimba e32GB, 128GB uye 256GB.
Izvo zvataurwa pamusoro zvakatsanangurwa, uye kana idzi uye mamwe makuhwa ari echokwadi, kana tichida iyo iPhone 7 Pro isu tichafanirwa kubhadhara € 931 inenge yeiyo 32GB modhi. Padivi rakanaka tingave neiyo iyo iPhone 7 Plus 64GB kana 128GB (haina kujeka kuti ingave iri yepakati modhi) yaizodhura nezve € 60 isingasviki pane iyo iyo iPhone 6s Plus 64GB inodhura gore rapfuura.
Asi mubvunzo, uye nezvandisingavimbi nemitengo iyi, ndezvekuti kungave kupenga kuvhura kwete imwe, kana asiri maviri mamodheru asina epamberi maficha ayo aisanganisira iwo Pro modhi. Tinorangarira kuti iyo iPhone 7 Pro yaizove iyo chete inogona kuverenga. neiyo Smart Connector (zvinogoneka zvakasarudzika zvishongedzo) uye iyo mbiri kamera. Kana isu takaita kusvetuka kubva kune iPhone 6s / Plus kuenda kune iyo iPhone 7 / Plus isu tinenge tichingovandudza iyo kamera (zvine runyerekupe kuti munhu wacho anozove ne 21Mpx ... chero bedzi isingarasikirwe nemhando yemamodheru aripo ) uye processor, asi isu taizochengetedza dhizaini, iyo skrini, iyo yekubata ID uye hatina kukwanisa kushandisa iPhone kesi dzatatova nadzo. Zvinoitawo sekukosha kutaura kuti ruzivo rwekutanga rwakaonekwa paWeibo, inozivikanwa seChinese Twitter, asi ipapo, senge mune microblogging network yatinoshandisa kune dzimwe nyika, ruzivo rwakawanda rwunoonekwa, uye kunyange rwunopesana ruzivo .
Chero zvazvingaitika, kufamba kushoma kushoma kwakaitwa naCupertino. Iyi ichave mitengo yeiyo iPhone 7? Ungaitenga here? Uye kana mhinduro iri hongu, ndeipi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo inofungidzirwa mitengo yeiyo iPhone 7 inosvinwa
Arkel millan akadaro
Dai ndaive neinowanikwa, ini ndaizotenga iyo 256 GB PRO vhezheni uye ndokanganwa zvachose nezve iyo nzvimbo iri muKuchengeta. Asi chokwadi changu chakasiyana.
Pindura kuna Arkel Millan
Maita basa nekutitaurira nezve mamiriro ako, tanga tichipisa nechishuwo chekuchiziva….
Pindura kuna ami
Damn, ndinotarisira kuti hachisi chokwadi nezve nhare nhatu dzakasiyana, chingave chinhu chikuru kubva kuApple. Yakagara ichisiyaniswa nekuburitsa yakanaka kwazvo uye nenjere nhare. Chero ani anoda kuti ibhadhare, izvozvi kana akatanga kuita mutsauko…. Yakakwenenzverwa nekuti uri kuyedza kutenga nharembozha inodhura iwe zvakanyanya, asi ndiyo yakadzikira pane ese matatu, kureva kuti, zvinokubhadharira € 3-3 uye hauna imwe yakanakisa? Haa inyasha yakadii
Apple Music iri kuuya kuSouth Korea munguva pfupi